Safiirka Imaaraadka oo muddo kadib maanta dib loogu arkay saaxada siyaasadda Soomaaliya - SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD | SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD
Taliyaha Booliska oo ka jawaabaya su’aalo Xildhibaanadu waydiiyeen +VIDEO
Safiirka Imaaraadka oo muddo kadib maanta dib loogu arkay saaxada siyaasadda Soomaaliya
Muqdisho (Caasimada Online) – Safiirka Imaaraadka Carabta u qaabilsan Soomaaliya Mohammed Ahmed Othman Al Hammadi ayaa muddo kadib maanta dib loogu arkay saaxadda siyaasadda Soomaaliya, oo uu ka maqnaa.
Mohammed Ahmed Othman Al Hammadi ayaa maanta ka soo muuqday munaasabaddii xarigga looga jarayay Machadka Diblomaasiyadda Soomaaliya, oo dowladda Qatar ay maal gelisay dib u dayactirkiisa. Machadkan ayaa lagu tabababri doona diblomaasiyiinta Soomaaliya.
Munsaasabadda ayaa waxaa sidoo kale goob joog ka ahaa safiirka Qatar ee Soomaaliya Hassan bin Hamza Hashim, waxaana yaab lahaa in safiirka Imaaraadka uu ka qeyb-galo mashruuca ay wadato Qatar.
Safiirka Imaaraadka ee Soomaaliya Mohammed Ahmed Othman Al Hammadi ayaa ka wareegtay Muqdisho islamarkaana saldhig ka dhigtay magaalada Nairobi, wixii ka dambeeyey bishii April 2018 markaasi oo xiriirka labada dal uu aad u xumaaday.
Xiriirka labadii dal oo markii hore ku xumaaday xiisadda Khaliijka kadib markii ay Soomaaliya ka diiday Sacuudiga iyo Imaaraadka inay xiriirka u jarto Qatar, ayaa kasii daray markii dowladda Soomaaliya ay 8-dii April qabatay lacag ku dhow 10 milyan oo dollar oo Imaaraadka ay kasoo dejiyeen garoonka diyaaradaha Muqdisho.
Toddobaad kadib, 15-kii April 2018, dowladda Imaaraadka Carabta ayaa joojisey tababarkii ay siin jirtay ciidamada Soomaaliya, ayada oo ka jawaabeysa lacagta ay qabsatay dowladda Soomaaliya.
Tan iyo mudadaas ma jirin wax xiriir muquda ah oo ka dhaxeeya Soomaaliya Iyo Imaaraadka Carabta.